सन्तुलित छिमेक नीति नेपालको समृद्धिको आधार : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली –
सन्तुलित छिमेक नीति नेपालको समृद्धिको आधार : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
दुई ढुंगाबीचको तरुल भनेर नकारात्मक ढंगले भन्दा छिमेकीहरुबीचको सम्बन्ध सन्तुलित बनाएर समृद्धि हासिल गर्न सकिने उनको भनाई रहेको थियो । समृद्धिका लागि सन्तुलित, प्रभावकारी र उचित छिमेक सम्बन्ध र वैदेशिक सम्बन्ध विकास गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । दुबै छिमेकी देशहरुका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रवृतिमा भिन्न भएपनि सम्बन्धमा सन्तुलन राख्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरेकाछन । ‘देशको यो स्थिति, यो आकारलाई नकारात्मक ढंगले बुझ्ने र त्यसैलाई दोष लगाएरु बस्ने दुई ठूला ढुंगाका बीचको सानो तरुल भनेर फैलिन पाउँदैन होला । फैलिन परेको छैन् । यसैमा समृद्धि बनाएर हुन्छ नी । हामी दुई ढुंगाको बिचमा छौँ भने फैलिन नपाउने होला तर यहि समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि हामीले सन्तुलित, प्रभावकारी र उचित प्रकारको छिमेक सम्बन्ध र वैदेशिक सम्बन्ध विकास गर्न आवश्यक छ’, उनले भने ‘सूर्य, चन्द्रमा र पृथ्वी पनि आफ्नो सन्तुलनमा घुमेका छन् ।
सूर्यका वरिपरि घुम्ने नौं ग्रहलाई डोरीले झुण्ड्याएको छैन् । यो दुनिया धर्ति र प्रकृति नै सन्तुलनमा छ । हामीले संसारको सबै सन्तुलन गर्नुपरेको छैन् । दुईवटा छिमेकी मिलाउने हो । यो पनि ठूलो कुरा हो र ? पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा जान सक्छौँ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वस्थ प्रतिस्पधालाई हटाएर अगाडी बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको समेत बताए । अरुलाई आफुभन्दा निच देखाएर ठूलो हुन नकिने बताउँदै उनले भने, ‘अर्काको कापी च्यातेर आफु अगाडी हुने होइन् । यसको भन्दा राम्रो लेखेर बढी नम्बर ल्याउने विद्यार्थीले उन्नती गर्छ । अरुको विगारेर आफु सप्रिने होइन् । अरुलाइृ पनि सप्रिन मद्दत गर्ने र आफु पनि सप्रिने बाटो हामीले लिनुपर्छ ।’ देशमा विकासका सबल सम्भावनाहरु रहेको उल्लेख गर्दै उनले जस्तोसुकै संकट आएपनि नडगमगाने अर्थतन्त्रत्र निर्माण गर्न सकिने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकारले एकदिनमा लगभग ६ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गरिरहेको बताए । दुई वर्षमा साढे तीन सय पुल निर्माण भएको, उर्जा उत्पादनमा असाधारण तिव्रताका साथ वृद्धि भएको र बचतमा पनि वृद्धि भएको उनेले दावी गरेकाछन् ।
« सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस घोटाला लगायत दर्जनौ काण्डमा ओली नै दोषी : डा. बाबुराम भट्राई
उपेन्द्र यादवको दोहोरो चरित्र »